Fifidianana kaominaly :: Tsy handefitra amin’izay mety ho fahataran’ireo kandidà ny CENI • AoRaha
Fifidianana kaominaly Tsy handefitra amin’izay mety ho fahataran’ireo kandidà ny CENI
Fahazarana amin’ny fiandrasana ny fe-potoana farany. Hentitra ny teny avy amin’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) manoloana ny fitarazohan’ireo kandidà amin’ny fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana amin’ny fifidianana kaominaly. Tsy hisy ny fanalavam-potoana fa rehefa tapitra ny fisoratana anarana eny anivon’ireo Rafitra misahana ny fanaraha-maso ny firotsahan-kofidiana isaky ny distrika (Ovec) dia hikatona ny varavarana ary tsy hisy fandraisana kandidà intsony.
Anisan’ny nohamafisin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, nandritra ny atrikasa niarahany tamin’ny Ceni sy ireo mpikambana sasany ao amin’ny governemanta, teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo izany, omaly.
Tetsy an-danin’izay, nanampy koa ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, fa: “tsy hisy fandeferana mihitsy ho an’ireo kandidà tara satria mila hajaina ny tetiandro efa napetraka. Manana hatramin’ny alakamisy amin’ny 5 ora hariva izy ireo amin’ny fanaterany ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany eny amin’ny Ovec”. Fantatra kosa fa 72 ora aorian’ny fisoratana anarana farany no hamoaka ny lisitr’ireo kandidà rehetra ny Ceni.
Fanamorana ny firotsahan-kofidiana
Anisan’ny naha velon-taraina an’ireo mpilatsaka hofidiana maro ny fahasarotan’ny fikarakarana an’ireo antontan-taratasy. Misy taratasy sasany mantsy tsy maintsy soniavin’ireo lehibem-paritra na prefektiora. Nandroso vahaolana amin’izany ny governemanta sy ny Ceni ka tapaka fa hampiharina ny lalàna mifehy ny fifidianana laharana 2014-020. Voalaza ao anatin’io lalàna io fa: “homena fahefana hanao ny fanamarinan-tsonia ireo ben’ny tanàna sy lefitry ny ben’ny tanàna am-perin’asa”. Afaka manamarina ny taratasiny eny anivon’ny kaominina hilatsahany ihany, araka izany, ireo kandidà.
Tsy nahitana vokany firy teo amin’ny fahavitrihan’ireo mpilatsaka hofidiana aloha izany fanovàna izany hatreto. Mbola vao dimy amby telopolo amin’izao fotoana izao ny isan’ireo kandidà manerana ny Nosy izay nanatitra ny filatsahan-kofidiany eny amin’ny Ovec. Iray amin’ireo ihany ny an’ny eto Antananarivo renivohitra. Ireo olona milatsaka amin’ny anaran’ny tenany manokana sy amin’ny anarana fikambanana kosa no maro an’isa.